Xiddiga ku guuleysan doona gooldhalinta iyo caawinta Premier League oo maanta la ogaan doono – Miyuu Mohamed Salah isku darsan doonaa labadaan abaal-marin? – Gool FM
(Liverpool) 22 Maajo 2022. Horyaalka Premier League ayaa la isla aaday maalinta ugu dambeysa si loo go’aamiyo arrimo dhowr ah, waxaana go’aannada la sugayo maanta ka mid ah in la ogaan doono kooxaha u soo baxaya Europa League iyo weliba kooxaha u laabanaya horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska.
Maqribnimada maanta oo la ciyaarayo kulammada lagu soo xirayo horyaalka Premier League, waxaa la ogaan doonaa xiddiga ku guuleysan doono kabta dahabka ah ee gooldhalinta Premier League si la mid ah laacibka qaadi doona gool caawinta ugu badan & xiddigaa goolhayaha ku guuleysan doona gacmo-gashiga dahabka ah.
Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah ayaa haatan hoggaaminaya gooldhalinta horyaalka Premier League waxaana uu leeyahay 22 gool, isagoo tartan kala kulmaya maanta Son Heung-min oo uu ka sarreeyo hal gool, waxaana dhaliyaha Tottenham uu dhaliyey 21 gool.
Kabta dahabka ah ee gooldhalinta Premier League maqribnimada maanta ayaa la go’aamin doonaa, iyadoo haddii ay sheeko sidaan ku dhammaato uu xiddiga xulka qaranka Masar ee Mohamed Salah uu ku guuleysan doono gooldhalinta Premier League.
Dhinaca kale isla Mohamed Salah ayaa ku tartamaya abaal-marinta caawinta horyaalka Premier League, waxaana uu yahay kan ugu caawinta badan illaa iyo haatan horyaalka, isagoo sameeyey 13 caawin, waxaana uu tartan kala kulmayaa xiddiga ay ka wada tirsan yihiin Liverpool ee Alexander Arnold oo isna sameeyey 12 caawin.
Su’aasha la is-weydiinayo ayaana ah Mohamed Salah ma kuwada guuleysan doonaa gooldhalinta iyo caawinta horyaalka Premier League?
Geesta kale waxaa kulammada lagu soo xirayo horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2021/22 lagu go’aamin doona gooldhayaha ku guuleysan doona gacamo gashiga dahabka ah ee la siiyo goolhayaha inta ugu badan shabaqiisa gool ka ilaashaday horyaalka.
Waxaa isku heysa labada goolhaye ee Allison iyo Ederson oo min 20 clean sheets ka sameeyey horyaalka Premier League oo maalintii ugu dambeysay taagan kal ciyaareedkan.